IINDAWO ZOKUTSHATA EZIBALASELEYO E-ITALI - UKWAMKELWA KOMSITHO
Eyona Ukwamkelwa Komsitho Iindawo zokuTshata eziBalaseleyo e-Itali
Phila la dolce vita kumtshato wakho wase-Italiya. IChiyacat / iShutterstock Ukuhlaziywa kwe-Aug 01, 2021
Iwayini, ubugcisa, ukutya okwenyani, iilwandle, imbali, uyilo… yintoni ongayithandiyo nge-Itali? Ilizwe laseYurophu elimangalisayo nelithandwayo kakhulu linokunika iindwendwe unyaka wonke, nelona xesha lilungileyo lokundwendwela kuxhomekeke ekubeni uhambo lwakho luya kubandakanya ntoni. Ixesha eliphezulu lenzeka ngexesha Ihlobo , ixesha eliphantsi ebusika, kunye nexesha lamagxa (alungele amaqondo obushushu amahle kodwa izihlwele zincinci) ekwindla nasentwasahlobo.
Nokuba kwenzeka ntoni xa undwendwela phesheya, iholide yakho yase-Italiya iya kuhlala ne-la dolce vita-ngakumbi xa iholide yeyakho umtshato apho uya khona . Ukusuka kwilali yaseTuscan ukuya kumachibi ase-Italiya ukuya kwiNxweme yeAmalfi, zininzi iindawo ezingalibalekiyo Umtshato waseNtaliyane . Apha, siqaqambise iindawo ezili-13 zomtshato zase-Itali ezilungileyo ukukunceda ukuba uqalise inkqubo yocwangciso lomtshato.
Inqaba iTrebbio eFlorence, e-Itali
UFlorence Inqaba iTrebbio yindawo ye-winery kunye nenqaba 15 yemizuzu ukusuka eFlorence. Ujikelezwe ziinduli zaseTuscan. Ngomnyhadala wakho, ungathatha ithuba kuyo yonke inqaba ekufuneka uyinikezele, kubandakanya igceke eliyimbali kunye necawe labucala. Iindwendwe zamkelwe eLa Sosta del Gusto yokutyela ecaleni kwenqaba. Indawo yokutyela ine-terrace apho unokuthabatha khona kwiindawo ezintle zesidiliya. UCastello del Trebbio uya kukunceda ucwangcise yonke into ukusuka kubuso ukuya kwientyatyambo, kwaye unamagumbi kunye neendawo zokuhlala (kunye namachibi!) Kwisiza, ukuze wena kunye neendwendwe zakho niphumle kwaye niphumle kule paradesi yaseYurophu.
Ihotele iVilla Cimbrone eRavello, e-Itali
Ihotele Villa Cimbrone ku-Amalfi Coast, eyenza ukuba inqweneleke ngaphandle kwebat. Kodwa kukukrwela nje ubukhulu bobukhulu bayo. Ngezinto ezigciniweyo zokwakha ezivela ngenkulungwane ye-12, umbono woLwandle lweMeditera, indawo yokutyela ye-2020 yaseMichelin, iphuli, isolarum kunye nehelipad yabucala, ihotele inqanaba elilandelayo. Kwaye usuku lwakho lomtshato apha aluyi kwahluka, kunye nomrhumo kubandakanya ukucwangciswa kwemisitho elungiselelwe wena, iinkonzo zobuhle, ukonwaba, ividiyo, ukufota, inkonzo yokubuka iindwendwe, inkonzo yezokhuseleko, itoliki nokunye okuninzi. Ngaphakathi kwihotele entle okanye ngaphandle kwezitiya ezichumileyo, umbhiyozo womtshato wakho waseVilla Cimbrone awuzukuhluka nakuphi na okunye — kunye nomqolo ongasemva ongafaniyo nezinye.
kude kangakanani kwangaphambili ukuthumela ukugcina imihla
Inqaba yaseRossino eMilan, e-Itali
Imalunga 'nokukhululeka ngokukhululekileyo' e Inqaba yaseRossino , Inqaba yeChibi iComo kuphela efumanekayo kwimisitho. Ingaphakathi lenqaba linamagumbi eminyhadala amahlanu abuyiselweyo: iSala della Corte, indawo yokuphumla esehlotyeni kunye negumbi lokutya ebusika; USala Benaglio, iholo yeziganeko ezihleliyo; ISala Manzoni, igumbi lokutyela elinokufikelela kwi-120; USala della Rosa, igumbi elisetyenziselwa ukusela nokudanisa ngexesha lokwamkela; kunye noSala della Volta, indawo yomsitho womtshato osondeleyo weendwendwe ezingama-30 ukuya kuma-40. Ngaphandle kukhulu ngokulinganayo xa kufikwa kwiindawo zomtshato, kubandakanya indawo ekuthiwa yipanoramic, intendelezo, igadi yomnquma kunye nepaki yesidiliya.
I-Villa Oliviero ePositano, e-Itali
Iqela e Villa Oliviero Uqinisekile ukuba indawo yindawo efanelekileyo yomtshato wakho wase-Itali. 'Usuku ongasoze ululibale,' iwebhusayithi yeVilla Oliviero ithi, 'umtshato owawusoloko uphupha ngawo.' Umtshato wakho wokunethezeka kule ndawo inqabileyo yamawa kunxweme iAmalfi iya kuba neyona mibono mihle. Indawo inokwamkela imibhiyozo yezenkolo nezoluntu kwaye ibonelela ngomcwangcisi womtshato wasendlwini, umpheki oqeqeshiweyo, umququzeleli womtshato, iinkonzo zokutolika, ukutya, umfoti, kunye noncedo ngeentyatyambo, ukuzonwabisa, iinwele kunye nokwenza, kunye nokuhambisa. I-Villa Oliviero inokuqashwa kwimitshato entwasahlobo, ehlotyeni nasekwindla, ikhuphe iindwendwe ezili-150 ngomtshato wohlobo lwe-buffet ngaphandle kwehlobo kunye neendwendwe ezili-120 zomtshato wohlobo lomtshato entwasahlobo nasekwindla.
Ihotele enkulu iTremezzo eTremezzina, e-Itali
ILake Como iyamangalisa Grand Hotel Tremezzo intle. Ukongeza kwindwendwe ekumgangatho ophakamileyo, ihotele eneenkwenkwezi ezintlanu ikwanamachibi amathathu, unxweme lolwandle lwabucala kunye nepaki yabucala. Ngaphakathi nangaphandle, imifanekiso yeGrand Hotel iyoyikeka, inokuba yimizobo. Umtshato wakho wamaphupha-al fresco okanye ngaphakathi endlwini- ungabanjelwa apha, nokuba iphupha elo liquka isidlo sangokuhlwa esihleli phantsi, i-buffet, ipati yecocktail okanye ubusuku obudlalayo. Amagumbi omnyhadala abandakanya iSala Contessa, enokuthi ibambe ukuya kuthi ga kuma-50 kumtshato osondeleyo, kunye ne-L'escale Trattoria kunye neBhari yeWayini, indawo yasemva kwetheko eneveranda edibeneyo kunye negadi.
I-Villa San Martino e-Apulia, e-Itali
Indawo iSan Martino Indawo yaseMeditera intle, inendawo esemaphandleni, izitiya kunye nedama lokuqubha. Indawo e-Itria Valley, le ndawo inikezela ngemisebenzi emininzi kunye nohambo lwakho lokuthatha ithuba elingaphaya kosuku lwakho olukhulu; Abasebenzi baququzelela ukhenketho olukhokelwayo lweemasseriya, ukukhwela ihashe, iinqwelomoya zebhayisekile kunye nokunye. Kodwa umnikelo wosuku lomtshato nawo uyamangalisa. Zintandathu indawo zangaphandle kunye neendawo ezintathu zangaphakathi, kwaye ezi ndawo zinokulingana ubungakanani bepati ukusuka kuma-40 ukuya kuma-250. ngeenkcukacha ezinjengeentyatyambo, iimoto, ukufota, indawo yokuhlala nokunye.
iingoma ezimnandi zokucula emtshatweni
I-Conti di San Bonifacio eTuscany, e-Itali
ITuscany Amanani eSan Bonifacio yindawo yomtshato yesidiliya yase-Italiya eyonwabileyo ukusingatha nantoni na ukusuka kwiminyango ukuya kwimitshato esondeleyo ukwenza isifungo sokuhlaziya. Ukusingatha imitshato yobunewunewu kangangeminyaka eli-10, abacwangcisi bendawo engaphakathi banokuthenjwa ukukunceda wenze umtshato wakho ogqibeleleyo. Iphakheji yomtshato ekhethekileyo yeConti di San Bonifacio ikunika ukufikelela okukhethekileyo kwilifa lehektare ezingama-150 ubusuku obuthathu. Yithi 'ndiyayenza' kumsitho womtshato ophahleni lwenduli ejonge kwizidiliya kunye neminquma. Iphakheji ikwabandakanya isidlo somtshato kunye newayini kunye nokuhonjiswa kwetafile yaseTuscan, ikeyiki yomtshato yesiko, ibha ebandakanyayo kude kube ngu-1 kusasa kubusuku bomtshato wakho, isidlo esisezinzulwini zobusuku, kunye nesidlo saseTuscan esamkela isidlo sakusihlwa xa ufika okanye ipati yepati ngosuku lwakho lokugqibela .
UCastello Papadopoli Giol eVenice, e-Itali
yimalini ibhiya newayini yomtshato
IVenice Inqaba yePapadopoli Giol yimbali enqabileyo ye-neo-Gothic kunye nepaki eqala ukubuyela kunyaka we-1192. Yinto entle, njengoko kufanele ukuba ibe-luhlobo lwendawo oluya kukwenza wena kunye nepati yomtshato wakho nive ngathi niyabukhosi ngosuku lwenu lomtshato. Ukuba umsitho osondeleyo nolwamkelo zizitayile zakho, indawo yokudlela yeConti Papadopoli ihleli ukuya kuthi ga kwi-30, kwaye igumbi layo lokutyela elwandle lihlala ukuya kuma-40. Kumcimbi omkhulu, iholo esembindini iphuma kwi-110. Ezinye iindawo zibandakanya iVenetian Iparlor, iholo ephambili kunye nefoyer, igumbi lokunxiba lenkulungwane ye-19 kunye nepaki eyimbali, evuleleke kuzo zonke iindwendwe. Ukusuka kumbono wobugcisa, indawo ikwanekhitshi lobuchwephesha, umoya-moya, iqonga lenkomfa, inkqubo yeaudiyo, iprojektha kunye nokupaka kwabucala kweemoto ezili-150.
Ihotele iHassler Roma eRoma, e-Itali
Ihotele iHassler Roma yindawo entle yomtshato wehotele eseRoma, enemihlaba enqwenelekayo ongayithatha esixekweni ngosuku lwakho olukhethekileyo. Ihotele eneenkwenkwezi ezintlanu ibekwe embindini, isenzela amava omtshato wokwenene, kunye namaRoma okwenyani. Indawo inikezela yonke into oyifunayo ukuzisa usuku lwakho olukhulu ebomini, kubandakanya neentyatyambo, iimenyu ezenziwe ngokwezifiso, amakhadi eendawo, ukonwatyiswa ngokukhoyo ngecartet yomtya weklasikhi okanye ibhendi yejazz, iikeyiki zomtshato, ukufota, ividiyo kunye neenkonzo zokutya. Ngapha koko, abatshakazi banokuzonwabisa ngeenwele, izithambiso kunye nonyango oluhle kwi-suite okanye kwi-spa yesiza. Emva komtshato, ungonwabela isuti yasemva komtshato kunye neqabane lakho elitsha.
IMasseria San Domenico ePuglia, e-Itali
Mandulo, IMasseria San Domenico yayiyinkulungwane ye-14 indlu yasefama enqatyisiweyo. Kule mihla, iMasseria San Domenico yihotele eneenkwenkwezi ezintlanu enezakhiwo zamatye amhlophe ezidityanisiweyo, amagumbi kunye nesuti, ii-piazzas ezivulekileyo, kunye neendawo zeentaba ezisemantla kunye neminquma kunye noLwandle iAdriatic emazantsi. Ukususela ngo-Ephreli ukuya kuNovemba, ungabamba umtshato okhethekileyo oqhubeka nobusuku obuthathu ukuya kwezintathu eMasseria. Ukususela ngo-Disemba ukuya ku-Matshi, ungabamba umbhiyozo wosuku olunye ngaphakathi kwamagumbi ehotele okanye kwivenkile yokutyela. Ihotele ibonelela ngeqela leminyhadala yobungcali, ukhetho lweewayini kunye nokukhetha kwimenyu yomnyhadala wakho.
Iindonga zamandulo zaseVilla eSorrento, e-Itali
Thatha ilizwi lethu ngalo: Bamba umtshato wakho weSorrento e Iindonga zaMandulo zaseVilla . Ngoba? Kuba le ndawo intle iliwa inendawo yokuthanda kakhulu-eqala ngombono wayo ongalunganga we-Bay yaseNaples kunye neNtaba iVesuvius. Iifoto zinokuthetha konke kule villa yabucala, kodwa siza kuchaza ngakumbi nangakumbi. 'Ixhotyiswe ngokupheleleyo kuyo yonke imibhiyozo,' iVilla Antiche Mura ineethambeka ezimbini, igadi yesitrasi kunye nokufikelela ngokuthe ngqo elwandle, kwaye iza neeseti zokucheba zesilivere, iitafile zelinen, izitulo ezimhlophe ezigutyungelweyo okanye zentsimbi, iikhandlela zekhandlela, imihombiso yeebuffet kunye ngakumbi ukwamkela umtshato wakho. Indawo iyonwabile ukulungiselela nantoni na oyifunayo emtshatweni wakho, ukusuka kwiileta ezinkulu zikaMnu noNksk.
Ihotele Villa Enrica eLipari, e-Itali
Ngaphandle konxweme olusemantla eSicily, i-Aeolian Islands 'Lipari likhaya Ihotele Villa Enrica -Enye imilingo yolwandle. Ihotele e-Aeolian-style yoyilo, ihotele inayo yonke into onokuyidinga ngeholide emnandi: ibhari, ithambeka lesidlo sakusasa, ichibi lokuqubha kunye ne-pool bar, i-Wi-Fi yasimahla, indawo ekuyimizuzu eli-10 ukusuka embindini wedolophu, kunye amagumbi asusela kwiklasikhi ukuya kwelona liphezulu, kunye nee-suites ezincinci. Kumtshato wakho ngokwawo, indawo leyo inikezela ngobukhulu obungaphezulu, njengomnyhadala okanye ulwamkelo kwithambeka, ejonge kwichweba laseMarina Lunga; imenyu yamaxesha onyaka ezaliswe kukutya okutsha, okwenyani okwenzelwe izinto ozithandayo; kunye nabasebenzi abaqeqeshiweyo kunye nabacwangcisi bomtshato bendawo abafumanekayo ukuzisa umbono wakho wosuku ebomini.
IBorgo San Felice eChianti Classico, e-Itali
IBorgo San Felice , ihotele e-Relais & Chateaux ehotele, iphakamisa uluhlu lwethu lweendawo zomtshato zase-Italiya. Indawo yokuphumla yewayini, echazwa njengelali yakudala, ijikelezwe ziinduli zikaSiena, izitrato ezincinci, iiyadi, iilgigias kunye nezidiliya ezenza imeko yomtsalane wembali. Luhlobo nje lwendawo onokufuna ukubalekela kuyo kwaye ulahleke kuyo. Kumnyhadala wakho okhethekileyo, iBorgo inamagumbi amabini okuhlangana anokubamba ukuya kwiindwendwe ezili-120, kwaye abasebenzi baya kukukhokela njengoko uceba kwaye uzenzele olusuku. Ukuba ufuna ukuphuma konke (kwaye asinakukusola), unokugcina igumbi elinamagumbi angama-29, ihotele eneendawo ezingama-39 kunye nezixhobo zayo zomtshato wokwenyani omnye.
izipho zokukhumbula unyaka utshatile
Iingoma zokuqala zomdaniso zokuqala 2016
zenzele owakho umtshato
Izipho zeminyaka emibini zomtshato wakhe
iikeyiki zomtshato iincasa zomtshato kunye nokuzaliswa
iivenkile zokudlala zesondo ezilungileyo kwi-Intanethi